हायात होटलमा विहेभोजमा सहभागी ठूलो संख्यालाई कोरोना संक्रमण ! – eSidhakura
मुख्य पृष्ठमुख्य समाचारहायात होटलमा विहेभोजमा सहभागी ठूलो संख्यालाई कोरोना संक्रमण !
हायात होटलमा विहेभोजमा सहभागी ठूलो संख्यालाई कोरोना संक्रमण !
निषेधाज्ञामा पनि सेवा दिँदै आएको काठमाडौंस्थित पाँचतारे होटल हायातका १८ कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। विहेभोजको लागि भारतबाट आएका कालिगढबाट कर्मचारीमा कारोना सरेको होटल स्रोतले जनाएको छ। एक सय ४० भन्दा बढी कर्मचारीमा गरिएको परीक्षणमा १८ जनालाई कोरोना पुष्टि भएको हो।